. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: 2009
မိုးခါးတို့ မောင်နှမတွေ စုပေါင်းပြီး အလှူတခု ပြုလုပ်ဖြစ်ပါမယ် .. လာမယ့် သောကြာနေ့ (ခရစ္စမတ်နေ့)မှာပါ .. အလှူအတွက် အားလုံး ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေကြတယ် .. မိုးခါးတို့ ပြုလုပ်မယ့် အလှူကို အဆင်ပြေမယ်ဆို အထက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လာရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ..
နိုင်ငံနဲ့ ချီပြီးလည်း မတွေးသေးဘူး
ခရစ္စမတ်နေ့ ညဘက်မှာလည်း ကမ်းခြေသွားမယ့် အစီအစဉ်လဲ ရှိပါတယ် ..း)) အားလုံးပဲ မိုးခါးတို့ရဲ့ အပျော်တွေ ကူးစက်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/23/2009 12:18:00 AM 18 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ဒိုင်ယာရီ, အမှတ်တရ
ကျမက နေ့ရက်တွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ မမှတ်မိတတ်တဲ့သူတယောက်ပါ .. အစပိုင်းကတော့ မှတ်မိတယ် ထင်ပါတယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ကချည်း သတိရ အမှတ်ရနေရတာ မလိုချင်တာနဲ့ မေ့ပစ်တတ်ခဲ့တယ် .. အဲလိုနဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ကျမအတွက် သိမ်းထားစရာ အမှတ်တရဆိုတာ သိပ်ကို နည်းပါးပါတယ် ..
မှတ်မိသလောက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်မှာ သူငယ်ချင်းတယောက် မိတ်ဆက်ပေးလို့ စုဗူးဆိုက်လေးမှာ စာစရေးဖြစ်ပါတယ် .. တကယ်တော့ စစချင်း ကိုယ်တိုင်လည်း မရေးတတ် (ခုလည်း မရေးတတ်သေးပါဘူး..) ရေးလည်း သိပ်ရေးချင် (ပို့စ်တင်ချင်တာပါ :D) ဆိုတော့ မနိုင်နိုင်းစနေရဲ့ စာတွေကို ကျမက စုဗူးလေးမှာ တင်တင်ပေးတတ်ခဲ့ပါတယ် .. စုဗူးမှာ အများစုက မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်လို့ ဘလော့စပေါ့ကို ၀င်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း သိထားလို့ပါ .. မစနေရဲ့ စာတွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ် .. စာတိုင်းမှာ တခုမဟုတ်တခု ရစေတတ်လို့ပါ .. ကျမ လေးစား အားကျတဲ့သူတွေထဲမှာ မစနေလည်း ပါပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မစနေလို သူတပါးအတွက် အင်အားဖြစ်စေမယ့်စာတွေ အတွေးတွေ ပေးနိုင်မယ့်စာတွေ ရေးဖြစ်ချင်ပါတယ် .. (ဖြစ် မဖြစ်ကတော့ ပါရမီပေါ့နော် .. :D)
စုဗူးက ကျမအတွက်တော့ စာကြည့်စင်ပါပဲ .. စုဗူးမှာ စာရေးကောင်းသူတွေ အလွန်များပါတယ် .. ပြီးတော့ ကျမအတွက် ညီမလေး တယောက်လည်း ရခဲ့တယ် .. သူကလည်း ကျမကို တွယ်တာသလို ကျမကလည်း သူ့အပေါ်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်မိတယ် .. ကျမ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက တွေ့ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ရဘူး .. သူပို့ပေးတဲ့ စာအုပ်နဲ့ အခွေလေးတော့ ကျမမှာ ရှိနေပါတယ် ..
နောက်ပိုင်းတော့ စုဗူးမှာ စာတွေ မရေးဖြစ်တော့ပဲ ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ ကိုယ် သပ်သပ် နေချင်လို့ ဘလော့စပေါ့က အိမ်လေးကို ဆောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. ကျမ ဘလော့စပေါ့ အိမ်လေးကို စဆောက်တုန်းက ယိုင်နဲ့နဲ့ပေါ့ .. ခုတော့ လူမြင်သူမြင် နဲနဲတော့ ကောင်းလာသလိုပါပဲ .. :D
စစချင်း ဘာမှမလုပ်တတ် (ခုလည်း ယောင်ဝါးဝါး :P)
ပထမ နာမည်ပေါ့ စဉ်းစားတယ် .. ဘာပေးရမလဲ .. နောက်ဆုံးတော့ eternal star ဆိုပြီး စဉ်းစားပြီး ပေးလိုက်တယ် .. စာကတော့ မရေးတတ်သေးပါဘူး .. ဘလော့နာမည်တော့ရလာပြီဆိုပြီး စာတွေလိုက်ရှာဖတ် ဘလော့လုပ်နည်းတွေလိုက်ဖတ် .. နောက်ဆုံး မနောသားဘလော့ကိုရောက်ပြီး သူ့မေးကို အက်ဖြစ်တယ် .. ပြီးတော့ ကျမ မသိတာတွေ သူ့ကိုမေး .. မနောသားကူညီပေးလို့ အိမ်တလုံး သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ ဖြစ်လာပြီ .. မနောသားကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ..း))
ကျမရဲ့ ပထမပို့စ်က နိုဝင်ဘာလ ၂၀ လို့ ပြထားပါတယ် .. တကယ်က ကျမ ဒီဘလော့ကို လုပ်ထားတာ ဒီထက်စောပါတယ် .. နာမည်စိတ်တိုင်း မကျတာနဲ့ ဟိုဟာအလိုမကျ ဒီဟာအလိုမကျပေါ့ ..
ကျမစိတ်က ဒါကို လုပ်ချင်ပြီဆို ချက်ချင်း .. ကမန်းကတမ်းလုပ်တဲ့အတွက်လည်း လုပ်ပြီးရင် စိတ်တိုင်းက မကျချင်ဘူး .. ဒီလိုနဲ့ နာမည်ပေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း စိတ်တိုင်းမကျဘူးပေါ့ .. နောက်တော့ နာမည်ထပ်စဉ်းစား စဉ်းစားရင်းနဲ့ မိုးခါး ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြိုက်မိတယ် .. ဒါပေမယ့် ပြောင်းလို့ရတယ် မရဘူးဆိုတာကို မသိဘူး .. ဒါကို ဗညားရှိန်က ပြောင်းလို့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့မှ မိုးခါး (ထာဝရကြယ်စင်) ဆိုပြီး အတည်ပြုဖြစ်သွားတာပါ ..
တချို့က ပြောတယ် .. မိုးခါး ဆိုတာ မကောင်းဘူးတဲ့ .. ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ကြိုက်ပါတယ် .. ဘာလို့ ကြိုက်လဲ ဆိုတာ သိပေမယ့် မပြောပြတတ်ပါဘူး .. :D
ကျမ စိတ်ကူးကတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးမှာ စိတ်ကူးနဲ့ စာရေးမယ် .. တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ပေါ့ .. :D
လူတိုင်းမှာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘ၀ပုံစံ အမျိုးမျိုးမျိုး ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင့် အမျိုးမျိုး နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူး ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ့်ခံယူချက် ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ် .. တယောက်နဲ့ တယောက် ဦးတည်ချက် မတူနိုင်သလို အဆုံးသတ်လည်း တူညီနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး .. ဘလော့မှာ စာရေးတဲ့သူတွေကလည်း ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုး ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုး စိတ်ခံစားချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးကြတယ် .. အနည်းဆုံးတော့ တခြားသူအတွက် အကျိုး မရှိခဲ့ရင်တောင် စာရေးတဲ့သူအတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် .. စိတ်တွေ မွန်းကျပ်နေတယ် .. စာတွေ ချရေးလိုက်လို့ ပေါ့သွားမယ် .. ကိုယ်နဲ့ ခံစားချက် တူသူတွေ ခင်မင်သူတွေ အချင်းချင်း အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးကြလို့ ခံစားချက်တွေ သက်သာသွားမယ် .. အနည်းဆုံးတော့ စာရေးသူအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့တော့ အကျိုးရှိမှာပါ .. အဲလိုပဲ ထင်မြင်မိပါတယ် ..
များသောအားဖြင့် ဘလော့မှာ စာရေးကြတဲ့သူတွေက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေ များပါတယ် .. ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ စိတ်ခံစားချက်တွေ ရှိကြမယ် .. ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ပြောပြဖို့အတွက် နားထောင်ပေးမယ့်သူ နားထောင်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူက ရှားပါးပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ပဲ စာတွေ ရေးဖြစ်ကြတာလားလို့ စဉ်းစားမိတယ် .. ခံစားချက် ပင်ကိုဗီဇ အခြေအနေ စတာတွေ ပေါင်းစုံသွားလို့ စာတွေစရေးဖြစ်ကြတယ်လို့ ထင်မိတယ် ..
ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ပဲ စာရေးဖြစ် ရေးဖြစ် ဘလော့မှာ စာရေးတဲ့သူတယောက် အတွက် အချိန်ဆိုတာ ဘလော့အတွက် ပေးရပါတယ် .. ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ ဖြစ်ဖို့လည်း အချိန်ပေးရပါတယ် .. ကိုယ့်ဘလော့လေး အသက်ဝင်နေဖို့လည်း အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားရေးရပါတယ် .. ဒါကြောင့်လည်း လူတိုင်း ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ့်အိမ်လေးကို အနည်းနဲ့ အများတော့ သံယောဇဉ်ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ..
ကျမကိုယ်တိုင်လည်း စာရေးချင်စိတ်ရှိလို့ ဘလော့ကို စရေးပါတယ် .. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘလော့ဂါလို့ မခံယူနိုင်သေးပါဘူး .. ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာတွေ ပေးရလောက်အောင်လဲ ၀မ်းစာက မပြည့်သေးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် စာရေးချင်စိတ်ရှိလို့ ရေးဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဘလော့အိမ်လေးက ကျမအတွက် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတခုပါပဲ .. သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဒီဘလော့လေးကြောင့် အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ် .. ညီအကို မောင်နှမ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လိုအပ်မယ်ဆို ကူညီပေးမယ့်သူတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ် .. ဒါတွေက အကျိုး အမြတ်လို့ပဲ တွက်ပါတယ် .. ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ကျမ သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ ဘလော့လေးမှာ မိုးခါးနာမည်နဲ့ မတတ်တတတ် စာတွေ ရေးနေပါဦးမယ် ..း))
ဏီကင်းက ကျနော်နဲ့ကျနော့ဘလော့ ဆိုတဲ့ ပို့စ်နဲ့ တဂ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် ကျမကလည်း ရေးလိုက်ပါတယ် .. ကျမနှင့် မိုးခါး ဆိုပြီးတော့ ..း)) ဏီကင်းကျေနပ်မယ် ထင်ပါတယ် ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/20/2009 02:42:00 AM 25 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/17/2009 10:58:00 PM 11 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/15/2009 12:29:00 AM 32 comments:
ခုချိန်က ရန်ကုန်မှာသာဆို ဆောင်းရာသီလို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြမယ့် အချိန်ပေါ့ ..
ကျမသာ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီဇင်ဘာ မနက်စောစောတွေမှာ ဖေကြီးက အတင်းနှိုးလို့ နှိုးရမယ့် မနက်တွေနဲ့ ပြည့်နေမှာပဲ .. အိပ်ရာထဖို့ အပျင်းထူတတ်တဲ့ ကျမနဲ့ မနက်စောစောဆို ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်ဇနီးနဲ့ လမ်းထလျှောက်ချင်တတ်တဲ့ ဖေကြီးတို့ရဲ့ မနက်စောစော နောင်ဂျိန် အချိန်တွေပေါ့ .. တခါတလေလည်း စိတ်လိုလက်ရ .. တခါတလေလည်း မှုန်ကုတ်ကုတ် မနက်ခင်းတွေကို ဖြတ်သန်းရလိမ့်မယ် ..
တချို့ရက်တွေကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီး ကန်တော်ကြီးတပတ် လမ်းလျှောက်ကြ ပြေးကြ ကြက်တောင်ရိုက်ကြ .. ဒီလိုအချိန်ဆို ကန်တော်ကြီးပတ်ပတ်လည်မှာလည်း ကားသွားရခက်လောက်အောင် လူတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေကြလိမ့်မယ် .. ရန်ကုန်မှာသာ ကျမ ရှိနေမယ်ဆို ဒီလူအုပ်စုထဲ ပါနေနိုင်တယ် ..
ဆောင်းတွင်း မနက်ခင်း အထူးသဖြင့် ဒီဇင်ဘာလမှာ လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာတိုင်းလိုလို လူတွေပြည့်နေတတ်တယ် .. ဒီလိုပဲ မနက်စောစောထ ဆော့ကစားပြီးတာနဲ့ မုန့်ဆိုင်တွေမှာလည်း လူတွေ ပြည့်နေလိမ့်မယ် ..
တချို့ကတော့ ပုံမှန် ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့အနေနဲ့ လမ်းတွေလျှောက်ကြတယ် .. တချို့ကျတော့ အဖော်ကောင်းလို့ .. တချို့ကျတော့ ကောင်မလေးတွေကို ပိုးပန်းဖို့ မနက်စောစောထ ဇာတ်လမ်းရှာကြလိမ့်မယ် .. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဇင်ဘာရဲ့ မနက်ခင်းတိုင်းက တခြားလတွေထက်တော့ အသက်ဝင်တာ မြန်နေကျပဲ ..
ချမ်းချမ်းစီးစီးမြူတွေကြားမှာ လက်တွဲထားကြတဲ့ ချစ်သူတွေလည်း ရှိမယ် .. တချို့ကတော့ ကြိုးစားဆဲ .. တချို့ကျတော့ မိသားစု အလိုက် ..
ကျမကတော့ လမ်းလျှောက်ခေါ်ပြီဆို လျှောက်ပြီး အပြန် ဘာစားကြမှာလဲ ဆိုတာက စမေးတယ် ..
တော်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ ကျမက ဖေကြီးနင်းတဲ့ စက်ဘီးနောက်က အချောင်လိုက်နေကျပေါ့ .. မနက်မိုးမလင်းသေးဘူး ဖေကြီးက လာနှိုးတယ် .. လမ်းလျှောက်မယ် .. လိုက်မလားတဲ့ .. ဒီလိုဆို ကျမက မျက်လုံးမဖွင့်ပဲ ပြန်မေးမယ် .. ဘာနဲ့သွားမှာလဲလို့ .. စက်ဘီးဆို လိုက်တယ် .. ခြေလျင်ဆို ဟင့်အင်းပဲ .. ဒီလို ကျန်းမာရေးလိုက်စားပုံများ .. :D
အဲဒီအချိန်တုန်းကပဲ လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်နေကျ လမ်းလေး စက်ဘီးစီးတဲ့ လမ်းလေး ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ရှိတဲ့ လမ်းလေးမှာလို့ ထင်တယ် .. အဖွားကြီးတယောက် ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ကျဲကျဲလေး အမြဲတမ်း စားနေကျ .. အဲဒီအချိန်ကတော့ ကျမတို့ မိသားစု စုံစုံလင်လင်ရှိနေခဲ့ကြတယ် .. ခုတော့ ..
အချိန်တွေလည်း သူ့ဟာသူ တရွေ့ရွေ့သွားနေတယ် .. ကျမတို့လည်း အချိန်ကို လိုက်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြတယ် .. တချို့က ပျော်ရွှင်စွာ .. တချို့က စိတ်ညစ်ညူးစွာ .. တချို့က အထီးကျန်စွာ .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တနေ့နေ့တော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဇာတ်သိမ်းကြလေသတည်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/03/2009 11:58:00 PM 27 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကျမနှင့်, ဒိုင်ယာရီ, အက်ဆေး